Mashruuca Dhaxalka Minnetonka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Ardaydeena waxay si isdaba joog ah kor ugu qaadaan kuna hogaamiyaan Minnetonka HS. Shaqadooda ayaa isbedel ku sameyneysa bulshadeena iyo waliba wixii ka dambeeya Minnetonka. Mashruuca Hidaha ee Minnetonka waa mashruuc adeeg afar sano ah oo ka socda MHS; fasal kastaa wuxuu doortaa sabab ay isbedel ku sameeyaan inta ay ku jiraan dugsiga sare. Ujeedada ugu dambeysa waa in fasal kasta uu awood u yeesho inuu dib u milicsado dhaxalkii uu uga tagay bulshada deegaanka iyo wixii ka baxsan.
Mashaariic dhaxalgal ah
Waa kuwan soo koobid mashruuc kasta oo heer fasal ah:
Fasalka 2021 wuxuu diirada saarayaa Caafimaadka iyadoo sanadkan diirada lasaaray caafimaadka maskaxda ee iskuulkeena iyo bulshada. Waxay u ururin doonaan Ururka Minnesota ee loogu talagalay Caafimaadka Maskaxda Carruurta http://www.macmh.org
Fasalka 2022 wuxuu hada kujiraa howsha lagu ogaanayo sababahooda. Freshmen waxaa lagu soo dhaweynayaa inay ku biiraan Legacy 2022 si ay uga caawiyaan fikirka iyo ka dhiibashada fikradaha fikradaha. Kuwa xiiseynaya inay ku biiraan, nambarka kooxeed ee 'Schoology' waa MNBR3-WJBT8.
U fiirso ogeysiis aakhirka Oktoobar oo ku saabsan Lacagteena-iyo-Lacagta Lacageed si aad uga faa'iideysato DHAMMAAN kooxaha dhaxalka 'sababaha!
Haddii ardaydaadu jeclaan lahaayeen inay si toos ah uga qaybqaataan Mashruuca Dhaxalka, fadlan jooji Xafiiska Hawlaha.
Waxqabadyada Dugsiga Sare /